हामी फोहोरी होइनौँ « Loktantrapost
हामी फोहोरी होइनौँ
३१ भाद्र २०७४, शनिबार ०८:३९
नेपालले सन् २०१७ भित्र देशलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २०१७ सकिन अब चार महिना मात्र बाूकी छ । चार वर्षसम्म गर्न नसकेको काम अब चार महिनामा पूरा गर्न बिल्कूलै सम्भव छैन । लक्ष्यअनुरुप काम पूरा गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले खुल्ला दिसामुक्त अभियानका लागि अर्को समयसीमा तोक्नुको विकल्प छैन । त्यसो त राष्ट्रिय लक्ष्य भन्दा एक कदम अगाडि बढेर झापा जिल्लाले सन् २०१६ भित्रै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पूर्वाञ्चलको विराटनगरमा गएर झापाका सरोकारवाला निकायका जिम्मेवार प्रमुखहरुले हाम्रो जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त बनाउँछौँ भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१६ को कुरै छाडौँ, २०१७ सकिन लाग्दा जिल्लाको एउटा मात्र गाउूपालिका खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएको छ ।
केही दिन अघि विर्तामोडमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानका बारेमा साझेदार संस्थाहरुले पत्रकारहरुसँग एउटा अन्तरक्रिया कार्यव्रmम राखे । तोकिएको समयसीमाभित्र अभियान सम्पन्न नहुने भएपछि सञ्चार क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र सञ्चारकर्मीलाई गुहार्ने आयोजकको उद्देश्य थियो । अभियान असफल बन्न लागेपछि अन्तिम समयमा साझेदार संस्थाहरुले गरेको हारगुहारलाई सञ्चारकर्मीहरुले सहजै नबुझ्ने कुरै भएन ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको तथ्यांकले जिल्लाका ८० प्रतिशत घरधुरीमा सरसफाइ र ८५ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको पहुूच पुगेको देखाएको छ । जिल्लामा साविक ८ नगरपालिका र ३३ गाउू विकास समितिमध्ये हालसम्म दुवागढी, खुदुनावारी, धाइजन, बुधवारे,जलथल, लखनपुर, धरमपुर र शान्तिनगर गरी ८ गाविस मात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भएका छन् । अहिलेको स्थानीय तहको पुनः संरचनालाई हेर्दा बुद्धशान्ति गाउूपालिका मात्र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भित्र पर्न सकेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि उत्तर र राजमार्ग आसपासका नगरपालिका र गाउूपालिकामा त्यति धेरै समस्या छैन । जटिल समस्या दक्षिणी सिमावर्ती क्षेत्रका गाउूपालिकाहरुमा छ । जहाू आदिवासी, मधेसी र मुस्लिम समुदायको बसोबास छ । कचनकवल गाउूपालिकाको ९ हजार ६६ घरधुरीमध्ये ५ हजार ४ सय १४ घरधुरी शौचालयविहीन छन् । त्यहाू ३ हजार ६ सय ५४ घरधुरीमा मात्र शौचालय छ । त्यस्तै गौरीगञ्ज गाउूपालिकाका ५८ दशमलव १ प्रतिशत र झापा गाउूपालिकाका ५१ दशमलव ३६ प्रतिशत बासिन्दाले अझै खुल्ला ठाउूमा दिसापिसाव गरिरहेका छन् ।
त्यसो त नेपालीले चर्पीमा दिसापिसाव गर्न थालेको धेरै भएको छैन । नेपालमा चर्पीको पहुूच हुने जनसंख्या सन् १९९० मा मात्र ६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौँ उपत्यका र केही शहरमा मात्र शौचालय प्रयोग गरिन्थ्यो । अधिकांश नेपालीले खुल्ला ठाउूमै दिसापिसाव गर्ने गर्थे । पहाडकाहरु झाडी पस्थे भने तराईकाहरु खोला जान्थे । तर, सन् २०१० मा आइपुग्दा ४३ प्रतिशत हूुदै २०११ मा ६२ प्रतिशत र २०१६ को अन्त्यसम्म ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा शौचालय निर्माण भई प्रयोग भएको पाइयो । चर्पी बनाउने अभियानमा पहाडे मूलका मानिसहरु अग्रसर हँुदै गए भने तराईबासीहरु पछि पर्दै गए । अझै पनि शौचालय नबनाएर खुल्ला ठाउूमा दिसापिसाव गर्ने तराईबासीहरु नै बढी छन् । जसका कारण देशव्यापीरुपमा सञ्चालन भइरहेको खुल्ला दिसामुक्त अभियान असफल बन्ने देखिएको छ । एक जमानामा सँगै बाटोमा दिसा गर्ने पहाडे मूलका मानिसहरुले कसरी शौचालय बनाइसकेर सुग्घरी भए तर तराईबासीहरु अझै बाटोमै किन दिसा गरिरहेका छन् त ? खुल्ला दिसामुक्त अभियानमा लागेका सरसफाइ अभियन्ताहरुले मसिनो गरी जवाफ खोज्नुपर्ने सवाल हो यो । केवल तराईबासीहरुलाई असभ्य, कुसंस्कारी र फोहोरी भनेर अपहेलना र विभेद गरेर हुँदैन न उनीहरुलाई शौचालयका लागि बाध्य पारिनु न्यायसंगत हुनेछ ।
घोडालाई कुद्न दिनका लागि लगाम खुकुलो पार्नुपर्छ । एक हातले लगाम तानेर अर्को हातले बेस्सरी कुट्दैमा घोडा दगुर्न सक्दैन । यतिखेर यो चोटमा तराईबासीहरु छन् । परिवर्तनलाई आफ्नो कब्जामा राखेर अरुमा बद्लाव हेर्ने कुचेष्टा गरिँदैछ । तराईबासीहरुलाई परिवर्तनशील बनाउन परिवर्तनका सबै ढोकाहरु खोलिदिनुप¥यो नि । अनि न उनीहरुले परिवर्तनलाईं आत्मसाथ गर्न सक्छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक स्तरले मानिसमा परिवर्तन ल्याउूछ । यी सबै बाटाहरु बन्द गरिदिएर शौचालयका लागि मात्र परिवर्तन खोजेर हँुदैन । अर्को कुरा, कसैको जीवनमा परिवर्तन आफैँ आउूदैन । परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । समय अनुसार परिवर्तनलाई तराईबासीहरुले आत्मसाथ गर्न नसकेकै हुन् । सरसफाइको जटिल समस्या रहेको कचनकवल, झापा र बाह्दशी गाउूपालिकाका तीनैजना प्रमुख तराईबासी हुन् । शिक्षा र चेतनाको अभावकै कारण सरसफाइमा ध्यान जान नसकेको तीनैजनाको समान बुझाइ छ । कचनकवल गाउूपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलम भन्छन्–चेतना नभएरै होला पक्की घर हुनेले पनि शौचालय बनाएका छैनन् । बाह्दशी गाउूपालिकाका अध्यक्ष खड्ग राजबंशी र झापा गाउूपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण शाहका अनुसार गरिबीका कारणले गर्दा पनि धेरैले शौचालय बनाउन सकेका छैनन् । आफ्नो भिटा मात्र भएकाले सुत्ने माटोको घर मुश्किलले बनाएका हुन्छन् । झन् अरुको भिटामा बस्नेहरुले आफैँ कसरी शौचालय बनाउन सक्छन् ? राजबंशीको प्रश्न छ । अझ भर्खरैको बाढीले तिनै गरिब निमुखाहरुको घरवार भत्काएर क्षति पु¥याएको छ ।
झापा जिल्लालाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि अहिले विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरु व्रिmयाशील देखिएका छन् । ग्लोबल स्यानिटेसन फन्ड अन्तर्गत युएन ह्याबिट्याटको सहयोगमा चारवटा साझेदार संस्थाले साविक ४ नगरपालिका र २१ गाविसमा खुल्ला दिसामुक्त अभियानको सहजीकरण गरिरहेका छन् । सहारा नेपालले घेरावारी, राजगढ, डाँगीवारी, गरामनी, शरणामती, गोलधाप, तोपगाछी र गौरादह नगरपालिका, विराट सामुदायिक अध्ययन केन्द्रले केचना, पथरिया,बालुवाडी, बनियानी, पाठामारी, पृथ्वीनगर, ज्यामिरगढी, कनकाई र शिवसताक्षी नगरपालिका, सगरमाथा सामुदायिक विकास केन्द्रले पाूचगाछी, महाभारा, कोरोवारी, गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, टाघनडुब्बा र कुमरखोद, मानव विकास केन्द्रले बिर्तामोड नगरपालिका तथा भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले आफैँ खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
अभियानको लागि युएन ह्याबिट्याटले साढे ३ करोडभन्दा बढीको सहयोग गरेको छ । चार वर्षे अभियानको अन्तिम समयमा यो बजेट खर्च भइरहेको हो । यतिका बजेट र यतिका संघसंस्था लागिरहँदा खुल्ला दिसामुक्त अभियान अझै गाउूघर र बस्तीस्तरसम्म पुग्न सकेको छैन । अपनत्व हुने गरी लक्षित समुदायलाई अभियानमा समेट्न सकेको छैन । कोठा र सभाहलमा कार्यव्रmम गरेर भत्ता पचाउने मेलो मात्र भएको टिप्पणी धेरै जनाबाट सुन्न सकिन्छ । शौचालय निर्माण नगर्नु, गर्न नसक्नु र निर्माण गरेर पनि प्रयोग नगर्नुको कारण मसिनो ढंगले केलाउन जरुरी छ । सरसफाइ अभियन्ताहरुले उनीहरुको भावना र समस्या बुझ्न सकेनन् कि अभियानका बारेमा बुझाउन सकिरहेका छैनन् ? समस्याको गहिराइमा जान नसकुन्जेलसम्म लाखौँ बजेट खर्च गरेर र तराईबासीलाई बाध्य पारेर यो अभियानलाई सफल बनाउन सकिदैन ।